Tallaalka COVID ee Carruurta: 3 shay oo muhiim ah in la ogaado - CHPW's blog blog website-ka rasmiga ah ee CHPW | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Carruurta | Nofeembar 4th, 2021
La dhajiyay Nofeembar 4th, 2021 - Waqtiga Akhriska: 3 Daqiiqad / s
Carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 hadda waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka COVID-19
Tallaalka COVID ee Carruurta
Saraakiisha caafimaadka federaalku waxay nadiifiyeen Pfizer-BioNTech (Comirnaty) COVID-19 tallaalka loogu talagalay isticmaalka degdegga ah ee carruurta da'doodu tahay 5-11. Waa tallaalkii ugu horreeyay ee COVID ee loo diyaariyo kooxdan da'dan. Ilaa 28 milyan oo caruur ah oo ku nool Maraykanka ayaa dhawaan u qalma.
Ma habboon tahay in carruurtu tallaalka qaataan? Madaxa Caafimaadka ee CHPW iyo dhakhtarka carruurta ee guddiga shahaado ka haysta Dr. Paul Sherman ayaa ka jawaabaya tan iyo su'aalaha kale ee muhiimka ah ee waalidiinta iyo mas'uuliyiinta ay qabaan.
Maxay tahay sababta ay carruurta yaryar u qaadanayaan tallaalka COVID?
Carruurtu aad bay ugu bukoon karaan COVID.
Waa run in carruur yar uu ku dhacay COVID marka loo eego dadka waaweyn, iyo kuwa uu ku dhaco COVID caadi ahaan uma xanuunsanayaan sida dadka waaweyn. Weli, qaar ka mid ah carruurta cudurka qaba ayaa laga yaabaa inay aad u bukoonaadaan. Dhab ahaantii, in ka badan 8,300 carruur ah oo da'doodu u dhaxayso 5-11 gudaha Maraykanka ayaa la dhigay cusbitaal COVID-XNUMX awgeed, iyadoo saddex meelood meel meel ka mid ah ay u baahan yihiin in lagu sii hayo daryeelka degdega ah, marka loo eego tirakoobka federaalku.
Caruurta cudurka qaba waxay sidoo kale u gudbin karaan COVID-19 qoyskooda iyo asxaabtooda.
Markaa in la tallaalo waxay difaacdaa naftooda iyo sidoo kale kuwa kaleba. Iyo mar kasta oo dadka la tallaalo, fursadaha yaraanta fayrasku waa inuu ku faafo ama isu beddelaa qaabab cusub, oo khatar badan sida noocyada Delta.
Carruurtu waxay u baahan yihiin inay wax bartaan oo ciyaaraan.
Tallaalku wuxuu caawiyaa in la hubiyo in carruurtu ay si badbaado leh ula kulmi karaan dhaqdhaqaaqyada aadka muhiimka u ah korriinkooda - sida ka qaybgalka fasalka shakhsi ahaan iyo la joogitaanka carruurta kale.
Tallaalku ma badbaado u yahay carruurtayda? Waa maxay waxyeelada?
Tallaalka Pfizer waa isla kii la siiyay malaayiin carruur ah iyo dad waaweyn. Waa qiyaas aad uga hooseeya oo keliya: qiyaastii saddex-meelood meel qiyaasta waxa ay helaan dadka 12 sano iyo ka weyn. Waxaa lagu bixiyaa laba tallaal oo saddex toddobaad u dhexaysa, isla jadwal la mid ah kuwa da'da kale.
Tijaabooyin caafimaad, in ka badan 3,000 oo carruur ah oo da'doodu u dhaxayso 5-11 ayaa la siiyay tallaalka Pfizer. Tallaalku wuxuu ahaa in ka badan 90% wax ku ool ah si looga hortago calaamadaha COVID.
Dhibaatooyinka ka iman kara
Dhibaatooyinka soo raaca ee ugu caansan waxay la mid yihiin kuwa lagu arko dadka waaweyn. Waxaa ka mid ah xanuunka goobta la duray (cudud xanuun), daal, iyo madax xanuun. Inta badan falcelinta waxay ahaayeen kuwo fudud ama dhexdhexaad ah.
Wax kiisas ah myocarditis, caabuq wadnaha, lagama helin tijaabooyinka Pfizer ee carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11. Tani waa mid khuseysa sababtoo ah tiro aad u yar oo qaangaar ah (ka weyn da'da 11) ee qaatay tallaalka Pfizer ama Moderna ayaa yeeshay saameyno halis ah oo ay ku jiraan myocarditis.
Saraakiisha caafimaadku waxay sii wadaan inay la socdaan wax kasta oo aan caadi ahayn maadaama tallaalada la siiyo carruur badan.
Faa'iidooyinka ayaa ka miisaan badan khataraha
Guud ahaan, faa'iidada tallaalka ee ka hortagga isbitaallada iyo dhimashada COVID-19 ayaa ka miisaan badan halista waxyeellooyin kasta oo naadir ah, oo halis ah.
Xaaladdan waxaan barbardhigay markii waajibaadka suunka kursiga la soo rogay. Waxa jiray sheekooyin ay ka mid yihiin, “Adeer waxa uu ku dhiman lahaa shil haddii ay xidhan lahaayeen suunka sababta oo ah iyaga ayaa laga saaray gaadhiga oo si nabad ah u degay ka hor inta aanu gaadhigu qarxin”. Xataa haddii xaaladahan oo kale ay run yihiin oo ay dad yar u dhinteen sababtoo ah waxay xidheen suunka, waxaan ognahay taas cagsigeeda. kumanaan nafo ka mid ah ayaa sannad walba lagu badbaadiyay suunku.
Halkeen ka heli karaa tallaalka carruurtayda?
Faahfaahinta weli waa laga shaqaynayaa, laakiin tallaalada Pfizer ee carruurta waxaa laga heli karaa xafiisyada dhakhaatiirta, farmashiyeyaasha, isbitaallada, xarumaha caafimaadka bulshada, iyo bixiyeyaasha kale ee caafimaadka. Dugsiyada qaar ayaa sidoo kale samaynaya rugo caafimaad si ay u bixiyaan tallaalada.
Ku Ballan sameyso, Waaxda Caafimaadka ee gobolka ayaa ku talisa:
La xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ama ilmahaaga, farmashiyaha xaafaddaada, ama rugta caafimaadka wareega ee kuu dhow
Ka raadi onlaynka gobolka Helitaanka Tallaalka Qalabka, kaas oo la cusboonaysiin doono marka qiyaaso badan oo Pfizer ah ay yimaadaan Washington
Uma baahnid amar dhakhtar si aad tallaal ugu hesho ilmahaaga, inkasta oo laga yaabo inaad rabto inaad kala hadasho arrimaha dhakhtarkaaga carruurta haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid.
Tallaalku waa bilaash ($0) dhammaan carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn.
Tallaalka COVID awooddo in la siiyo isla wakhtiga tallaalada kale ee caadiga ah, sida tallaalka hargabka.
Read our Seddexda Waxyaabood ee Ugu Waa Weyn ee laga Baran karo ee ku saabsan COVID-19 Tallaalada loogu tala galay da ’yarta (Maajo 2021) ee ku taal CHPW Connections blog
Booqo CHPW COVID-19 bogga talaalka si aad u hesho macluumaad kale oo muhiim ah oo ku saabsan tallaalka
« 5 Su'aalood oo lala yeesho Maamulaha Gobolka Salish ee CHPW
Khayraadka ka soo kabashada fatahaada »
Soo dejinta Sonkorowga: Sidee Tech u caawin kartaa